Iimfundiso ZikaYesu NgeTyuwa Needrarhma | Ngaba Ubusazi?
Ngaba uYesu wayephazama xa wayethetha ngetyuwa ephelelwa sisongo sayo?
KwiNtshumayelo yakhe yaseNtabeni, uYesu waxelela abalandeli bakhe oku: “Niyityuwa yomhlaba; ke ukuba ityuwa ithe yaphelelwa sisongo sayo, buya kubuyiselwa njani na ubutyuwa bayo? Ayinamsebenzi konke konke ngaphandle kokulahlelwa phandle ukuze inyathelwe ngabantu.” (Mateyu 5:13) Ityuwa inqanda ukubola. Yiloo nto uYesu wafanisa abafundi bakhe netyuwa kuba babenokukhusela abanye ekonakaleni ngokomoya nasekuziphatheni.
Ityuwa yoLwandle Olufileyo
Ngokuphathelele oko kwathethwa nguYesu ngetyuwa ephelelwa sisongo, iThe International Standard Bible Encyclopedia ithi: “Ityuwa yoLwandle Olufileyo yayixubana nezinye izimbiwa; nto leyo eyayibangela iphelelwe bubutyuwa bayo.” Iyaqondakala ke ngoko into yokuba uYesu ayichaze ityuwa ngokuthi “ayisenamsebenzi konke konke ngaphandle kokulahlelwa phandle.” Le ntyilalwazi yongeza ngelithi: “Nangona ukungcola kwakuyenza ityuwa yoLwandle Olufileyo ibe kumgangatho ophantsi kunezinye iityuwa zezinye iiLwandle, ukufumaneka kwayo ngokulula ngaselunxwemeni, kuyenza ibe yeyona isetyenziswayo ePalestina.”
Wawuthetha ukuthini kubalandeli bakhe umzekeliso kaYesu wokulahleka kwengqekembe yedrarhma?
UYesu wenza umzekeliso womfazi owathi emva kokulahlekelwa yingqekembe yedrarhma kwezilishumi wathabatha isibane waza watshayela indlu ngokucokisekileyo de wayifumana. (Luka 15:8-10) Ngomhla kaYesu idrarhma enye yayiphantse ilingane nomvuzo wosuku, ngoko ke, kwakulahleke imali eninzi. Sekunjalo, lo mzekeliso wawufundisa nenye nto ebalulekileyo ngobomi.
Ezinye iimbekiselo zibonisa ukuba amanye amabhinqa ayehombisa ngeengqekembe. Ngoko ke, kusenokwenzeka ukuba uYesu wayethetha ngengqekembe eyayisisacholo esixabisekileyo seminyaka okanye iyinxalenye yekhazi lomfazi. Enoba yayisithini na imeko, kuyaqondakala ukuba lenze umgudu ongaka wokuyikhangela.
Izindlu zabantu abaqhelekileyo bomhla kaYesu, zazakhiwe ngendlela yokuba ubushushu nokukhanya kungangeni konke konke. Iifestile zazimbalwa ukuba zazikho kwa ukubakho. Phantsi kwakusandlalwa iindiza ezomisiweyo zezityalo ezahlukahlukeneyo. Xa ingqekembe ithe yawa, kwakuba nzima ukuyifumana. Omnye umhlalutyi uthi, “Yiloo nto xa kuwe into incinane enjengemali kwindawo enjalo, kwakulayitwa isibane kuze kutshayelwe indlu. Le yayiyeyona ndlela yokuyikhangela.”
Ngaba Ubusazi?—Disemba 2012